Exam Result | DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION
Exam Result, Informations
April 5, 2017 DMA-MM
Date Notice No. Subject
29/06/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Marine Engineering Officer Class III ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class III
29/06/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Marine Engineering Officer Class IV & V ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class IV and V
20/06/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Electro-Technical Officer ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO Result
20/06/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Marine Engineer Officer Class I & II ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class I & II
30/05/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Written Examination Result for Marine Engineer Officer Class I & II ထုတ်ပြန်ခြင်း Written Result of Marine Engineer Officer Class I & II
26/05/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination for Deck Officer Class III ထုတ်ပြန်ခြင်း Deck Office Class (III)
05/05/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination for Chief Mate (F.G) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း Chief Mate (F.G) (1-2022)
29/04/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination for Master (F.G) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း Master exam result 1,2022
24/03/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination for Deck Officer Class II, Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း C.M(FG) (NCV) BOE (1-2022)
28/02/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ထုတ်ပြန်ခြင်း Class III Oral Result
23/02/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV & V Certificate of Competency ထုတ်ပြန်ခြင်း Marine Engineer Officer Class IV & V
23/02/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ထုတ်ပြန်ခြင်း Marine Engineer Officer Class I & II
23/02/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO
22/02/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination for Deck Officer Class lll (1/2O22)ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW (1-2022) (ORAL) RESULT
26/01/2022 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Written Examination Result for Marine Engineer Officer Class l & II (Reg:III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class I and II Written Result
30/12/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination Result for Deck Officer Class llI (Reg:II/1) (1/2021) ထုတ်ပြန်ခြင်း Deck Officer Class III Written Exam Result (1 2021)
27/10/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for CHIEF MATE (F.G) (2/2021) ထုတ်ပြန်ခြင်း Chief Mate (Oral Result)
18/10/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination for MASTER (F.G) (2/2021) ထုတ်ပြန်ခြင်း MASTER (F.G) (2-2021) (ORAL) Result
27/08/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination Result for Deck Officer Class ll (Reg:II/2), Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) ထုတ်ပြန်ခြင်း Deck Officer Class II (1.2021) Exam Result
28/06/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Deck Officer Class lll (1/2O21) ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW (1-2021) ORAL Result
28/06/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) ထုတ်ပြန်ခြင်း Third engineer ORAL Result 3-2020
20/05/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO Oral Result
05/03/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) (1/2021) ထုတ်ပြန်ခြင်း CHIEF MATE ORAL RESULT (1-2021)
01/02/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (1/2021) ထုတ်ပြန်ခြင်း MASTER (F.G) (1-2021) (ORAL)
26/01/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck officer Class III (Reg: II/1) (2/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း Deck Officer Class III (BOE(2-2020) Result
05/01/2021 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class ll Chief Mate (F.G) & (NCV) (2/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း Chief Mate (BOE) (2-2020) Result
30/12/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) ထုတ်ပြန်ခြင်း 3E.Oral Result.30.12.2020
14/09/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class lll (2/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW (2-2020) (ORAL) EXAMINATION RESULT
09/09/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း Oral Result for ETO
09/09/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class VI & V Certificate of Competency ( Reg. III/3) ထုတ်ပြန်ခြင်း Oral Result for IV&V
09/09/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း Oral Result for I&II
27/08/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း CIII_Written result_2-2020
18/08/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class I & II Written Result 2-2020
18/08/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင် နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO BOE Written Result -2-2020
17/07/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class lll (Reg:ll/1) (1/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း CLASS III (1-2020)
02/07/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) ထုတ်ပြန်ခြင်း Third engineer ORAL Result 1-2020
02/07/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO ORAL Result 1-2020
09/06/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း Class-I & II Oral RESULT 1-2020
04/06/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း Class-III_Written result_1-2020
04/06/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO BOE Written Result -1-2020
29/05/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & (NCV) (2/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း Chief Mate Oral Result
19/05/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (2/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း MASTER RESULT (2-2020)
13/05/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class I & II Written Result (1-2020)
26/03/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg.II/2) Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (1/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (BOE) (1-2020)
05/03/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class II( 1/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW ORAL (1-2020)
26/02/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of
Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း Class-I & II Supplementary Oral RESULT 3-2019
Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) ထုတ်ပြန်ခြင်း SUPPLEMENTARY ORAL Result 3-19
Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO ORAL SUPPLEMENTARY 3-2019
04/02/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) ထုတ်ပြန်ခြင်း Third engineer ORAL Result 3-2019
28/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO ORAL Result 3-2019
24/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for Chief Mate (F.G ) & Chief Mate (NCV) (1/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း CHIEF MATE (F.G)(NCV) (ORAL)(1-2020)
21/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း Class-I & II Oral RESULT 3-2019
17/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for MASTER (F.G )(1/2020) ထုတ်ပြန်ခြင်း MASTER (1-2020) (RESULT)
08/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း CIII_Written result_3-2019
08/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO BOE Written Result -3-19
03/01/2020 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III ( Reg. II/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW (BOE)(3-2019)
24/12/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း MEO Class I & II Written Result 3-2019
11/12/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg:II/2), Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV), (BOE 3/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း CHIEF MATE (F.G) (NCV) BOE (3-2019)
09/12/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III (3/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း OOW (3-2019) ORA L RESULT
22/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း ETO ORAL Result 2-2019 –
22/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Result of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency (Reg: III/3) ထုတ်ပြန်ခြင်း CLASS IV&V Supplementary Oral Exam Result 2-2019
22/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for the Revalidation of Certificate of Competency ထုတ်ပြန်ခြင်း Class III Supplementry ORAL Result 2.19
22/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း Class-I & II Supplementary Oral RESULT 2-2019
17/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Results for Chief Mate(F.G) & (NCV) (3/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (ORAL) (F.G) (NCV) (3-2019)
04/10/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency ( Reg. III/3 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း CLASS IV&V Oral Exam RESULT 2-2019 (4-10-2019)
27/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း Third engineer ORAL Result 2-2019
20/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Results for Master F.G (3/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Master (ORAL RESULT) 3-2019
03/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_2-2019
27/08/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I &II Oral RESULT 2-2019
19/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I &II Oral RESULT 2-2019
19/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ 8.ETO ORAL Result 2-2019-
09/09/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination Results for Deck Officer Class III (Reg II/1) (2/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (2-2019) (BOE) RESULT
27/08/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result-2.19
27/08/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I & II Written Result 2-2019
15/08/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Results for Deck Officer Class II Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (2/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (F.G) RESULT
15/07/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Results for Deck Officer Class III (2/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL (2-2019) PASSED
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
( Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MMU EXAM (BOE) RESULT 1-20189
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2019 –
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of
Competency ( Regulation III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III Supplementry ORAL Result
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Supplementary Oral RESULT 1-2019
03/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 1-2019
21/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency
(Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Oral Exam RESULT 1-2019
21/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
(Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Oral RESULT 1-2019
14/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (2/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (2-2019) ORAL
08/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2019-
08/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for MEO Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III_Written result_1-2019
06/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/2) (1/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (1-2019) BOE
29/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (2/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL (2-2019)
24/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for MEO Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I &II Written Result 1.2019
11/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ 4.ETO BOE Written Result
02/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Oral Examination Result for Deck Officer Class III (1/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) (1-2019)
29/03/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Written (BOE 1/2019) Examination Results of Deck Officer Class II (Reg.II/2) Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CM (FG,NCV) (BOE) 1-2019 RESULT
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of
Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Oral RESULT 3-2018 (Supplementary)
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of
Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III, SUPPLEMENTARY ORAL Result
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Supplementary Result 3-2018 –
31/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer oral result 3-2018
31/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Oral Examination for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (1/2019)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate (F.G) & (NCV) (1/2019)
25/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/1)(3/2018)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ O.O.W BOE (3-18) result
24/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency (Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class IV&V exam result 3-2018
24/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I&II oral result 3-2018
18/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Oral Examination for Master (F.G)(1/2019)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ master (0ral)(1-2019)
09/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO oral result 3-2018 –
03/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_3-2018
19/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I &II Written Result 3.2018
19/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result – 3-2018
14/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW(ORAL)(3-2018)
06/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg.II/2), Chief Mate (F.G) and Chief Mate (NCV) (BOE 3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ chief mate (BOE) (3-2018)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
(Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I &II Oral RESULT 2-2018
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 2-2018 (B)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency
(Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Exam RESULT 2-2018 (8-11-18)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 2-2018 -(1)
01/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (3-18)
08/10/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER (F.G)(RESULT) (3-2018)
03/10/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 2-2018
28/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL (2-2018) RESULT
17/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/1) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Examination for Deck Officer Class III
11/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
11/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competencyများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Exam RESULT 2-2018
05/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_2-2018
23/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 2-2018 –
20/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg:II/2) Chief Mate (F.G) and Chief Mate (N.C.V) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHEFT MATE (F.G) (NCV)(2-18)
15/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg. III/2 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I&II, Written Result 2/2018
03/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result – 2-2018
18/07/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း ဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHEFT MATE ORAL RESULT (2-2018)
29/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း ဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for MASTER (F.G) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL (2-18)
18/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 1-2018
13/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Completed Examination Result for OOW (F.G) (1/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (ORAL) (1-18)
08/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III ( 1/2018 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(1-18) updated
25/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)
များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I DMA Oral RESULT
Class-II DMA Oral RESULT
22/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Written Examination for Deck Officer Class III ( Reg:II/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) Result (1-18)
18/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_1-2018
09/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2018 –
07/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) & Chief Mate ( NCV ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE) FG & NCV RESULT(1-18)
CHIEF MATE (F.G) (1-18)
CHIEF MATE (NCV) (1-18)
30/04/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I&IIWritten Result 1.2018
20/04/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result
30/03/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (1/2018)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE ORAL RESULT (1-18)
16/03/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 3-2017
21/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination Result for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competencyများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V _ Oral Exam RESULT
20/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for MASTER (F.G) ( 1/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL RESULT (1-18)
19/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS I&II Oral RESULT- 16.2.2018 II
15/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Written Examination result for Marine Engineer Officer Class III Certificate of
Competency ( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III Written result 3/2017
24/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Written Examination for Deck Officer Class III ( Reg: II/1 ) ( 3/2017 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) Result (3-17)
22/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Deck Officer Class III (3/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(3-17)
19/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO CLASS I & II BoE Written Result
20/12/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result
19/12/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Deck Officer Class II (Reg:II/2) Chief Mate (F.G) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE) RESULT(3-17) 001
17/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Electro-Technical Officer များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result
15/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class III များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO C III oral result
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class IV & V များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V _Exam RESULT
10/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER & CHIEF MATE (F.G) (NCV) COMPLETED 123
24/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO class I & II oral result of22017
13/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination Results for MASTER (F.G)
(2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL RESULT (2-17)
03/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Third Engineer Officer Certificate of Competency (Reg.III/1)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII Written Result 2-2017
21/09/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှResults of Written examination for DECK OFFICER CLASS III ( Reg:II/1) OOW (F.G)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Result DECK OFFICER CLASS III (F.G)
11/09/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှResults of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg. III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO C I & II BOE written result
30/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှOral Examination Results for DECK OFFICER CLASS III ( Reg:III/2 ) (2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(2-17)
18/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate(BOE) written result 02A 210817
18/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ EXAMINATION RESULTS FOR CHIEF MATE (F.G) BOE(2A/2017)
COMMENCING ON 24-07-17 များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE)2-2017A Passed list
12/07/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result
28/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate(F.G) (BOE) written result
28/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
EXAMINATION RESULTS FOR CHIEF MATE (F.G) BOE(2/2017)
COMMENCING ON 05-06-17 များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate (F.G) (BOE) 2/2017
20/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV & V Certificate of Competency ( Reg. III/3 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class IV & V oral result
09/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I & II Combined March 2017 Oral result
01/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE ORAL RESULT _1-17_ FINAL
01/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 )
19/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for MASTER (F.G) (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Oral Examination Result for MASTER (F.G) (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination Results for O.O.W BOE (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Examination Results for O.O.W BOE (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Examination Results for O.O.W BOE (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Examination Results for O.O.W BOE (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )